Uwe ejiji nke nwanyi bu uwa nile nke obi na ihe omumu, nke e gosiputara n'uzo na agba. A sị ka e kwuwe, mgbe ị na-azụkarị uwe dị iche iche maka ndị nnọchianya nke ọmarịcha ọkara nke mmadụ, a na-azụta ihe ụfọdụ nke uwe ejiji, ma ọ bụ na ndụmọdụ. Uwe ejiji uhie bu ihe kwesiri ekwenye nke uwe ejiji nke onwe ya, nwanyi obi ike na uto. Nabata, mgbanwe dịgasị iche iche nke onyinyo, na-enye ohere iji mesie njirimara nke ụdị onye nwere ụdị ụdị ahụ dị ka o kwere mee. Nke a bụ otu n'ime ihe ole na ole dị mma maka ụmụ agbọghọ nke ọ bụla, ma ọ bụ nke dị nro ma ọ bụ nke dị nro, ọbara ọbara, brunette ma ọ bụ na-acha odo odo.
Uwe ejiji uhie: onye ka ị chọrọ ịbụ taa?
Uwe mkpuchi uhie, nke megidere nkwenkwe ndi mmadu, abughi nani ihe ejikoro ya na ulo oru di iche iche, kamakwa maka igapu n'ìhè. Mgbe ịchọtara ihe nlereanya dị mma site na ihe dị irè, ị nwere ike ịga njem ma ọ bụ njem. Azu uhie na-ekpo ọkụ nwere ike ime ka ị bụrụ dike heroine nke akụkọ akụkọ Little Red Riding Hood, ma na akụkọ a, ị ga - abụ onye na - agba chaa chaa, onye ọmarịcha nwa nwoke mara mma ga - ewe ebe wolf.
Ihe mkpuchi akpụkpọ anụ uhie abụghị naanị àgwà nke nwanyị na-azụ ahịa na-aga nke ọma, kama ọ bụkwa ihe bara uru n'ezie, karịsịa na ihu igwe nkwụsị. Ejikwa uwe a bụ ezigbo onye na-akwado uwe mgbede. Ọrụ bụ isi, itinye ya, abụghị ịdị ka Superman. N'ezie, o yikarịrị ka ị ga-etinye ya na tọn na ya, ma ụda na-enweghị mmeri nwere ike iduga na njedebe dị njọ.
Ya mere, olee ihe ga-eyi uwe mgbokwasị uhie ? Dị ka nsụgharị nke mgbede, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kacha mma jikọtara ya na ejiji ejiji, ọ bụghị iji ngwa na ihe ịchọ mma. Nke kachasị nke ọma, uwe elu dị otú a na-eji ejiji nke ihe ndị na-esonụ:
agba aja aja;
Iji mee ka usoro ịzụ ahịa siri ike, jikọta ya na eriri akpụkpọ anụ na uwe akwa, tinye uwe na akwa akwa na akwa jaket dị ka ihe atụ, kọfị ma ọ bụ mọstad.
Ndị inyom sneakers
Nwa nwanyị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Uwe uwe oji
Kedu aha aha ogologo ejiji?
Jeans maka zuru
Ụlọ mbata - arịa ụlọ
Gịnị ka ifatilaiza strawberries?
Ndabere nke Floxal
Taste nke okpomọkụ - osikapa-vanilla kechie
Ụdị echiche nke mmadụ
Penticure 2017 - ejiji ejiji, ihe odide nke imewe, ihe na-adọrọ mmasị
Nwa Virgo - esi mata ya?
Nzuzo nke okike mgbe mpaghara mpaghara a
Kedu ihe na-adọrọ mmasị ụmụ agbọghọ n'oge okpomọkụ a 2016?
Ịgwọ ọrịa akpịrị na ndị okenye nọ n'ụlọ
Kedu mgbe ị ga-esi nụ mgbe ị gachara ọpụpụ?
Kedu ụbọchị ụdọ eriri nwa nke nwa amụrụ ọhụrụ dara?
Dexpanthenol na Bepanten - iche
Ụdị nyocha nke ụmụntakịrị
Na-agba agba maka ogologo ntutu 2014
Cheesecakes na cheese na oven